Humanitarian Texts » Blog Archive » Zimbabwean women are suffering increasing repression
Zimbabwean women are suffering increasing repression
Written on August 4th, 2007 in Humanitarian and Life Concerns Comment first! »
AMNESTY INTERNATIONAL PRESS RELEASE, AI Index: AFR 46/023/2007, 25 July 2007.
In the report, the organization released the findings of a three-week research mission during which Amnesty International’s delegates interviewed scores of women of all ages throughout Zimbabwe, from both townships and rural areas.
“The Zimbabwean government needs to address the underlying economic and social problems that are motivating women to protest – rather than attacking them and criminalising their legitimate activities in defence of human rights,” said Irene Khan, Secretary General of Amnesty International.
While in Zimbabwe, Amnesty International spoke to women activists who make up the majority of the hundreds of Zimbabwean human rights defenders who have been arbitrarily arrested and detained for engaging in peaceful protest marches or meetings in the last two years. Delegates spoke to many women who became human rights defenders following repeated violations of their rights by the Zimbabwean government … (full text).